Pogba oo xaqiijiyay inuu xagaagan ka tagayo kooxda Manchester United – Gool FM
(England) 16 Juunyo 2019. Xiddiga kooxda Manchester United ee Paul Pogba ayaa xaqiijiyay inuu doonayo ka dhaqaaqista Red Devils si uu tijaabiyo loolan cusub ee meel kale ah, wuxuuna xaqiijiyay inuu doonayo inuu ka tago Old Trafford inta lagu gudi jiro suuqa kala iibsiga ee xagaaga.
26 jirkan reer France ayaa xiliyadii lasoo dhaafay oo dhan lala xiriirinayay inuu ka tagayo Manchester United, iyadoo ay jiraan warar la xiriirinaya in Real Madrid ay xiiseeneyso inay shaqaaleysiiso, kaddib markii uu codsaday macalinka kooxda ee Zinedine Zidane.
Warar hore ee maanta soo dhacay ayaa sheegayay in wakiilka Paul Pogba ee Mino Raiola uu kulan la qaadan doono madaxweyne ku xigeenka kooxda Juventus ee Pavel Nedvěd, si ay uga wada hadlaan suurtogalnimada ah in markale ay dib u ceshadaan laacibka reer France.
Laakiin shabakada caanka ah ee “Sky Sports” ayaa shaacisay wareysi uu dhawaan bixiyay Paul Pogba waxaana hadaladiisa ka mid ahaa:
“Mustaqbalkeyga? Waxaa jira hadalo iyo fikir badan”.
“Aniga ahaan, seddex xilli ciyaareed ayaan ku qaatay kooxda Manchester United, waxaana bixiyay heer wanaagsan, waxaa jiray daqiiqado farxad leh, iyo daqiiqado xun sida qof walba oo kale, iyo koox kasta ee kale”.
“Kaddib xilli ciyaareedkan, iyo wax kasta oo dhacay xilli ciyaareedkan, inkastoo aniga ahaan uu ii ahaa xili ciyaareed fiican, waxaan u maleynayaa inay noqon karto wakhti fiican ee aan ku tijaabiyo loolan cusub ee meel kale ah, waxaan ku fikirayaa arintaas, si aan u tijaabiyo tartan cusub ee meel kale ah”.
Waxaa xusid mudan in Paul Pogba uu soo caga dhigtay kooxda Manchester United xagaagii 2016, isagoo kaga soo dhaqaaqay Juventus qiimo dhan 105 milyan euro.